Factory iru eru
Anyị Uru Product Quality Ma Innovation
Ngwa Tilmicosin phosphate bụ a macrolide ogwu mgbochi ọgwụ, ọ bụ nweta nkwalite ngwaahịa nke tylosin phosphate na-akpan ji mee ihe maka ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ. Ọ bụ harmfulless, fọduru free, na ike effection na nchekwa. Ọ tumadi gwọọkwa maka akụkụ okuku ume na ọrịa na-kpatara mycoplasma, anụmanụ infective pleuropneumonia na kpatara actinobacillus na pasteurella multocida na ara ọrịa nke lactational ụmụ anụmanụ. The ọgwụ mmetụta bụ 4 ka 8 ugboro karịa tylosin phosphate. N'otu oge ahụ, ọ h ...
Products n'ụwa nile, Thai-ala, Germany, Brzail na na.
R & D na Certificate nke Régis-tration - Tilmicosin phosphate.
Safety Standardization dị elu karịa mba ụkpụrụ.
Na onwe ha technology nnyocha na developpment center.
Ka anyị anyị mmepe ka a elu
Uru Of Antibacterials Of Veterinary Drugs
Otu bụ na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ọgwụ nje so karịa a otutu. Ntoputa na ojiji nke ọgwụ nje bụ ọrụ ebube na ihe ndị mere ụmụ mmadụ na nkà mmụta ọgwụ, ọ na-agaghị echefu onyinye ụmụ mmadụ ọrịa.
On n'ụtụtụ nke April 14, 2018, anyị ụlọ ọrụ haziri niile ọrụ ịmụta enterprise omenala ọzụzụ, mgbe abụọ na ọkara awa na-amụ, anyị na-erite uru na nweela a otutu.
Anyị ga-amụba ma na-ewusi mmekọrịta anyị nwere.
Okwu: Huadian Pioneer Park, Huadian Township, Qihe County, Dezhou City, Shandong, PRChina
Ceftiofur Hydrochloride ntụ ntụ , Ceftiofur Hydrochloride With Gmp , Ceftiofur Hydrochloride 103980-44-5 , Tilmicosin 25% Oral Solution, Ceftiofur Injection For Animal, Ceftiofur Antibiotic,